tropical cyclone gossa “storm”ii yoo ta’u waantonni itti bekkamuni immo dhibaa diqqa jiddu kessa qabuu fi thunderstormii bubbe jabba fi bokka lolla fiddu kan ofii kessa qabu dha. Tropical cycloniin kan jabbena isaa argattu ho’a yerro qillensi jidhaan olii ka’u fi hurkii walitti qabame garra bishaani jijjiramu irratti. Tropical cycloniin gossa “storm”ii ho’a qabban (“warm core” storm systems) waan ta’aniif akki itti jabbena argataniin “mechanism”ii ho’a cyclonic windstorms kan akka nor’easter, European windstorm fi polar low irra adda ta’e qabu.
Cyclone Catarina, South Atlantic tropical cyclone kan yerro bayye hin mullane, yoo International Space Station irra ilallani, March 26 2004
"Tropical cyclone" maqqa meteorological ta’ee dha. Maqaan durra “tropical” jedhamu waan lamma irra dhufee. Tokko bakka inni itta argamu irratti hunda’etti, kunis kutta lafaa (earth) kessa bakka tropical jedhamutti waan bayyinan argamufii. Kan lammesso immo fakki isaan Maritime Tropical air masses gubbatti qaban irratti hunda’un. Maqaan lammesso “cyclone” immo kan dhufee waan isaani gossa “storm”ii cyclonic ta’aniif. Stormotni cyclonic ta’an Hemisphere kabbatti kan counterclockwise marran yoo ta’an, Hemisphere kibbatti immo clockwise marrani dha. Bakka itti argamani fi jabbena isaani irrattti hunda’udhan tropical cycloniin maqqa garagara qabu. Fakkenaf hurricane, typhoon, tropical storm, cyclonic storm fi tropical depression..
Tropical cycloniin bubbe, bokka cimma, “wave” gudda fi storm surge (kan olii ka’e yerro tokko gaddi debi’u) bayye jabba fi hamma ta’e bassu danda’u. Kan itti dhallatan bishan gudda ho’a bassu irratti yoo ta’u yerro garra lafa dhufuu human dhaba. Kanaaf bakkotni qarqarratti argaman yeroo bayye tropical cycloniin midhamu, akkasumas bakkotni jiddu biyyatti argamani kanaaf tropical cyclone jabba ta’een hin midhamne. Haa ta’u malle bokkan jabban lollan akka garra kessa sennu kan godhu yoo ta’u, “storm surge”iin (storm olii gara gaddi daffe bu’u) immo bishaan “ocean” gara kessa hanga 25 mile (40 km) akka lolla ta’e akka seenu godha. Ummatta irratti midhama bayye gudda fidanulle, tropical cycloniin qillensa goggoga ballesu ni danda’u. Ho’a fi “energy” batanii tropics irra gara temprate latitudes gessu. Kuni immo atmospheric circulation bayye dansa yoo ta’u, troposphereiin lafa akka wal-qixxuma yokan “balance” akka qabattu godha. Akkasumas qillensi ho’a qabu lafa (earth) hunda gubbatti akka jirratu godha.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropical_cyclone&oldid=22260"
Last edited on 7 Bitootessa 2013, at 17:59
This page was last edited on 7 Bitootessa 2013, at 17:59.